မှော်ဘီရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ | iMyanmarHouse.com
သိန်း 2000 မှ သိန်း 4000 ထိ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
ဈေးနှုန်း သိန်း 2000 မှ သိန်း 4000 ထိ
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
မှော်ဘီ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8008732 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Snow White Real Estate Agency ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8275784 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြေအကျယ်(2ဧက ခွဲ ရှိ(လယ်မြေ+ခြံမြေ) ရောင်းမည်။
4,000 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8266169 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Golden Asia Real Estate ပိတ်ရန်
SL8-001738, For Sale Land, Hmawbi Tsp တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8234661 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Rendezvous ko latt Real Estate Com.,Ltd. ပိတ်ရန်
10,ဧကပုံစံ7လယျမွရေောငျးမညျ။
3,500 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8153588 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7967458 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7959995 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7928908 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
3,200 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8279401 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Myanmar United Asia Realestate ပိတ်ရန်
မြေ (9)ဧက၊ မြောင်းတကာ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7941079 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Aung Khaing Khant Co.,Ltd. ပိတ်ရန်
မှော်ဘီမြို့နယ်သည် ၄.၁၁ ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီးရန်ကုန်မြို့၏ မြောက်ဘက်စွန်းတွင်တည်ရှိသော မြို့နယ်ဖြစ်သည် ။ မြို့နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် လှည်းကူးမြို့နယ် ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်တို့တည်ရှိသည် ။ မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် မြောင်းတံခါစက်မှုဇုန်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်သောစတီးလ်များကိုအဓိကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည် ။ ထို့ပြင် မှော်ဘီနည်းပညာတက္ကသိုလ်သည်လည်း မြို့နယ်တွင်းအရေးပါသောအဆောက်အဦးဖြစ်သလို ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိနည်းပညာကျောင်းသားများအားထားရသည့် တက္ကသိုလ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်မှော်ဘီမြို့နယ်သည် စက်မှုဇုန်လုပ်ကွက်များ ၊ အရေးပါသည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းလည်းတည်ရှိသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထဲတွင်ပါဝင်သလိုမြေကွက်လွတ်များစွာကျန်ရှိနေသေးသည့် မြို့နယ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ။